नेपालमा राज्य प्रणाली कब्जा गरेर बसेका बिदेशी एजेन्टहरु छन
हाम्रो देश नेपालकाे सिमाना मिचिरहदा र देशमा घटिरहेका घटनाहरुले गर्दा मलाई नि यो मन दुखिरहेको छ । जुन हाम्रो देश नेपाल पुर्बमा टिस्टा देखि पश्चिममा कागडासम्म फैलिएको नेपाल भारतीय बिस्तारबादले गर्दा आज देश पुर्बमा मेची देखि पश्चिम मा महाकाली सम्म खुम्चिएको छ।
त्यही भु-भाग पनि दिनप्रतिदिन भारत र चीनले हस्तक्षेप गर्दै आइरहेका छन भने देशमा भयानक घटना घटिरहेका छन । तर सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ। २ लाख ४९ हजार १७ वर्ग किलोमिटर भएको बिशाल नेपाल आज १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएकाे छ ।
त्यही भुभाग पनि पुर्व,पश्चिम र दक्षिणमा भारतले अतिक्रमण गर्न खोजिरहेको छ भने उत्तरमा चीनले ३६ हेक्टर भुभाग मिचिरहेको छ। हाम्रो देशको अस्मितालाई लुट्न दिदैनौ, देशको सिमानाहरु जोगाउनु छ र देशमा घटेका घटनाहरुको छानबिन गरेर नेपाल सरकारले कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ।
देशलाई खोक्रो पारेर चीन र भारतलाई पोस्ने घातक सम्झौताकै कारण आज पनि हामी राजनीतिकै लागि लडाइँ लडिरहेका छौँ । निरन्तर दुखिरहेको छ नेपाली मन, नेपाली स्वाभिमान ।नेपालले सिमाको लागि सक्रिय कुटनैतिक पहल गर्नुपर्छ र नेपालमा भएका दाशढुङ्गा, दरबार हत्याकाण्ड जस्ता घटनाहरूकाे छानबिन चाडो होस् ।
यहाँ अहिले बहुदलको स्थापना पछि नेपाललाई अराजकता, अस्थिरता र अराजकताको दिशामा लैजान साम्राज्यबादीहरुद्वारा संगठित रूपमा सुरु गरिएको छ । यी नेपालमा रहस्यमय घटना होइनन, कुरा लुकाइ-छिपाइ गरेर दलाल र भ्रस्टाचारीहरुले गरेको षडयन्त्र हो।
यी सबै हत्याकाण्ड देखि सिमानासम्म मिचिएका रहस्यमय पत्ता नलाग्नु अत्यन्त दु:खद कुरा हो । यहाँ नेपालको अस्मिता सबैभन्दा बढी जोखिममा पार्दै लग्यो, नेपाल समस्या पनि यहि हो।यी बिदेशी एजेन्टाहरुलाई राज्य प्रमाणित बाट निकाल्नु पर्ने अभियान जब सम्म नेपाल सरकारले सक्दैन तब सम्म यस्ता समस्याहरु नेपालमा भइरहन्छन ।
नेपालमा नाङ्गो प्रकारको बिदेशी शासन चलेको छ । नेपाली जनताहरुले दलको पर्खाल तोडेर बिदेशी गुन्डाहरुको बिरुद्धमा लड्न ढिला गर्ने हो भने नेपाल भगौडा बिदेशीहरुको भिखारी बन्न पुग्छौ। देशलाई कुन दिशा तर्फ लान खोज्दै छन भन्ने विषयमा सबै बिरगोर्खाली नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने देखिन्छ।
वर्तमानमा यस्ता गम्भीर घटनाहरु घटिसकेका छन भने अझै नेपाली जनताहरु छिमेकी राष्ट्रहरुले पटकपटक लडाइँ र हाम्रो देशका भ्रष्टाचारी धेरै नेताहरूकै पछि पछि लाग्दै जाने हो भने कुन दिन हाम्रो देश पनि रहदैन । देशमा घटिरहेका घटनाहरूको छानबिन र मिचिरहेको भुमि प्रति नेपाल सरकार निरही अवस्थामा देखिएको छ किन ? यदि राज्यशक्ती को मेरुदण्ड नेपाली सेना हो भन्ने बुझेका यी गिरोहहरुले पहिलो निशाना नेपालको सेनालाई नै बनाएको छ।
देश धेरै लुटिसकेको छ । नेपाल सरकारले हातहतियार सहित सिमानामा खै त सेनाहरु पठाएको ? यहाँ बिदेशी एजेन्टाहरुले गर्दा नि देश लुटिरहेको देखिन्छ। यी एजेन्टाहरुको कारण दलहरूले राष्टिय हितमा काम नगर्ने देखिन्छ। कुनै पनि उत्पादनशिल क्षेत्रमा सरकारले लगानी नगर्ने, ठुलठुला भ्रस्टाचारका काण्डहरु, हत्याकाण्ड जस्ता गलत काम छानबिन नहुने।अनि घृणित दुराचार स्वार्थका लागि नैतिकता र निस्ठामा हुर्केका नेपाली चेलिहरुलाई भारतको बेश्यालयमा लगेर बेचिदिने।
यी धेरै जसो केबल हुन, साम्राज्यवादका चौकादारहरु हुन। नेपालमा राज्य प्रणाली कब्जा गरेर बसेका बिदेशी एजेन्टाहरु छन । यिनिहरुले नै नेपाल लाई अस्थिर बनाउने, कुशासनको साम्राज्य चलाउने जस्ता यी यस्ता कामले झन नेपाल कमजोर भएको छ । सबै जनताहरुले दलहरुको पर्खाल तोडेर राष्ट्रका नाममा एकजुट हुने अपुर्ण मौका यहि हो ।
भारतले पटकपटक हेपिरहेको र विस्तारवादी नीति नै पहिला देखि नै गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले कुटनैतिक ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत सिमाको लागि वार्ता गरेर त्यही मिचिन लागेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपाली नयाँ नक्सा मा राख्नु पर्छ । नेपालको मुख्य विश्वभर चिनिएको सर्बोच्च सिखर अभिन्न अंग सगरमाथा लाई यी गुगाेलले बदमासी काम गरेर चीन मा राख्दै छ । त्यो पनि कुटनैतिक ढङ्गले यो वार्ता गर्नु आवश्यक छ।
हिजोआज पनि निरन्तर नेपाली आमाको स्वाभिमान र हामी सबैको मन दुखिरहेको छ । विस्तारवादी भारतीय सरकारले पटकपटक त्यही सिमा पनि खोसिएको र अनि उता चीनले नेपालको संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लाको ३६ हेक्टर भुभाग पनि मिचिरहेको छ।
भारतले ५४ वटा क्षेत्रहरु कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेचिक्षेत्र, टनकपुर आदि क्षेत्रहरू अतिक्रमण गर्दै आएको छ र पहिले नेपाली गोर्खाली फौजले गढवाल, सतलज पारिका सबै स-साना अधिराज्य जस्तै नैनिताल, अल्मोडा, देहराधुन, दार्जीलिङ, सिक्किम सबै नेपालका अंगहरु राजाहरुले बचाएका थिए ।
अहिले त्यो भुमिहरु पनि सबै भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गर्दागर्दै मेची देखि महाकाली सम्म खुम्चियो । त्यही भु-भाग पनि अहिले झन झन भारतले दादागिरी देखाएर अतिक्रमण गर्दै खोज्दै छ तर नेपाल सरकार अझै पनि मौन छ। अझै म भन्छु समय र शब्दको लापरबाही नगरौं र तागत यी बिस्तारबादी रास्ट्र सङ्ग लगाउनुस।देशको माटोको लागि लड्नुस, स्वाभिमानको लागि लड्नुस र देश र जनताको सुरक्षा गर्नु नै नेपाल सरकारको दायित्व हो।जुन अहिले हस्तक्षेप भइरहेको छ ।
सुदुरपश्चिमकाे मुटु र नेपालको अभिन्न अंग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लाई जोगाउनुस अनि बाकी अतिक्रमण भएका सबै भु-भागको लागि नि लड्नु छ। जुन अहिले हस्तक्षेप भइरहेको छ । सुदुरपश्चिमकाे मुटु र नेपालको अभिन्न अंग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई जोगाउनुस अनि बाँकी अतिक्रमण भएका सबै भु-भागको लागि नि लड्नु छ ।
जुन भारतले लिपुकेकबाट मानसरोवर चीन सम्म रणनीति बताएको छ । त्यसैमा स्थगित गराएर कुटनैतिक ढङ्गले काम गर्नु पर्छ सरकार । तागत आफ्नो देश र सबै नेपाली नेताज्यूहरुले बोलेको शब्द अनुसार काम गर्नुस ।
भारतले पटकपटक हेप्ने, पेल्ने र मिच्ने गरेको छ यसलाई कसरी हुन्छ । सरकारले कुटनैतिक ढंगले अगाडि बढाेस । दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भनेको नेपालको भयंकर ठूलो घटना हो जुन मदन भण्डारी शाहसी र मिलनसार र देशको लागि केही गर्नु पर्छ भन्ने जननेता थिए । उनको रहस्यमय जिप दुर्घघटना भएको होइन यी दलालहरुले नै रहस्यमय गरेको हत्या हो ।
त्यो छानबिन गरेर दासढुङ्गा, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड र अन्य घटनाहरुको छानबिन गरेर दोषिलाई हदै सम्म कारबाही होस सरकार । देशमा भ्रष्टाचारी लाई कारबाही गरौ लुकाएर यो सधैंको लागी लुक्ने वाला छैन बरु यस्ता भ्रष्टाचार, बलात्कारी जस्ता नराम्रा गतिविधिका क्रियाकलाप लाई रोकौ र यस्तालाई कडा कारबाही गरौँ।देशलाई बलियो बनाएर बिदेशीएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरौँ।
किसानले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज मिनाह हुनुपर्छ